गस्ती गरिरहेका भारतीय सेना हिउँमा चिप्लिएर लडेपछि पाकिस्तान पुगे ! -
गस्ती गरिरहेका भारतीय सेना हिउँमा चिप्लिएर लडेपछि पाकिस्तान पुगे !
एजेन्सी। हिउँमा चिप्लिएर लडेपछि पाकिस्तान पुगेका एक भारतीय सेनालाई पाकिस्तानका सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ। भारत प्रशासित जम्मु कस्मिरको गुलमार्गमा गस्ती गरिरहेका भारतीय सेना हबिल्दार राजेन्द्र सिंह नेगी पहाडको हिउँबाट चिप्लिएका थिए।
जनवरी ८ मा राजेन्द्रकी श्रीमती राजेश्वरीलाई राजेन्द्र हराएको खबर आएको थियो। केहि दिनपछि राजेन्द्र भारत पाकिस्तान सिमानामा गस्ती गरिरहेको समयमा हिउँबाट चिप्लिएर लड्दा दुर्घट’नाबस पाकिस्तानको भूमिमा प्रवेश गरेको पत्ता लाग्यो।
समाचार संस्था एएनआइका अनुसार यतिबेला भारतीय सेनाले राजेन्द्रलाई भारत फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ। देहरादुनका राजेन्द्र सन् २००२ मा भारतीय सेनामा भर्ती भएका थिए। हाल उनी पाकिस्तानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ।
सहमतिमा सम्पर्क विवादपछि बलात्कार ;श्रीमान वैदेशिक
कोरोनाको कारण निधन भएका ब्यक्तिको अन्त्यष्टिमा
कल्पनाको वयान : फेसबुकमा अन्तरंग फोटो
एउटी महिलाको जि’द्दीको अगाडि हार्‍’यो चीनको सरकार ! देखियो अनौठो दृश्य (तस्बिर)
यस्तो अनौठो ढुङ्गाले बनाइदियो रातारात करोडपति !
पहिलो र दोस्रो श्रीमानसँग एक करोड ४५ लाग ठगि तेस्रो श्रीमानसँग अमेरिका टा’प
८ महिनापछि हि’रासतबाट रिहा भयो भाले कुखुरा
भाजपा सांसद भन्छिन्ः राममन्दिर बन्नासाथ कोरोना देश छोडेर भाग्नेछ (भिडियो)
पीपीइभित्र भित्रीवस्त्र मात्र लगाएर बिरामीको उपचार गर्ने नर्स
पहिलो विमानको आविष्कारक रावण !